Madaxweyne Xaaf oo maanta furay kalfadhiga 5-aad ee baarlamaanka Galmudug (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xaaf oo maanta furay kalfadhiga 5-aad ee baarlamaanka Galmudug (SAWIRO)
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf) oo maanta magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ka furay kalafadhiga 5-aad ee baarlamanka Galmudug ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin abaaraha, amniga iyo dhinacyo kale.
Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in Galmudug ay soo martay dhibaatooyin kala duwan islamarkaana haatan la rajeeynayo in laga baxo dhibaatooyinkaasi, isagoona xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ugu baaqay in dhankooda ka qabtaan shaqooyinka adag ee horyaalla.
Dhinaca kale, madaxweyne Xaaf ayaa ugu baaqay maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ee ka arrimiya gobolada dhexe ee Soomaaliya inay kusoo biiraan maamulkiisa, islamarkaana ay qaataan wadahadalada nabadeed.
Wuxuu madaxweyne Xaaf sheegay inay xilli kasto diyaar u yihiin wadahadal iyo dib u heshiisiin balse cidii arrintaasi diido ay iska qabanayaan, si loo bad-baadiyo shacabka Galmudug oo haatan wajahaya dhibaatooyin kala duwan.
“Illaahay hanoo soo jeediyo walaalaheena Ahlu-sunna inay na garab istaagaan oo wax nala hagaajiyaan islamarkaana ay noo yimaadaan, hadii ay noo imaan waayaan Ilaahay ayaa naga qaban doonna, marnaba ma ogalaan doonno in Galmudug lakala qeybiyo, ciddii isku dayda inay kala qeybiso waan iska dhicineeynaa, si aan u bad-baadino shacabkeena” Sidaas waxaa yiri madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf).